panel okuhlobisa MDF odongeni kukhona impahla empeleni esasisesisha, okuyinto ngempela ezithakazelisayo njalo ethembisa. ukukhiqizwa yabo iqhutshwa usebenzisa ekamelweni ukushisa, lapho esebenzisa umfutho ophakeme ingxube ehlanganisa kokokunamathisela Ukwakheka kanye nokhuni uthuli kwakhiwa ishidi impahla.
MDF odongeni panel kunezimo eziningi, phakathi lapho kungenzeka ebaluleke kakhulu kubhekwa jikelele. Indaba libhekene ukubukeka ekhangayo, okuvumela ke kabanzi ukwakhiwa. Liphinde lunikeze esihle zihlale zifudumele, umsindo izinga ukumuncwa buso izintambo ngekwetinhloso letehlukene. Ukuba lula nesivinini ukufakwa enye inzuzo ebalulekile MDF panel. Sanoma yikuphi ukulimala ishidi elilodwa zisuswe kalula ukuba indawo entsha. Lapho yekwembesa lubondza kunoma iyiphi enye impahla ezidingekayo ukuze akwazi ukufeza umsebenzi wokulungiselela kusengaphambili, futhi MDF odongeni panel ogibele kakhulu ukumane, ngaleyo ndlela ngaphandle ukungcola nothuli. Isici esibalulekile salo ukusebenzisa kwabo ukuthi kubo Akudingi ukunakekelwa okukhethekile. Abakwazi ngezikhathi esesula indwangu okuyinto wetted ngamanzi noma ithuluzi ekhethekile. Iphaneli eyenziwe MDF kungenziwa camera nge ukuvenisha, okuyinto kakhulu kunwetshwe impilo yabo yenkonzo.
Ukusetshenziswa le nto konga isikhathi nemali, kodwa ngoba ethandwa kangaka emkhakheni wokwakha nokulungisa. Ukukhweza panel okuthwala ngisho umuntu azihlangene umsebenzi wokulungisa isimo imisebenzi yabo, ngesikhathi ethula zingancane wemakhono eyisebenzisa. MDF odongeni panel nazo efanelekayo nophahla lwangaphakathi ngawo. Zenziwa asendabeni imvelo, okuvumela ukusetshenziswa kwabo inqubo wokulungisa izibhedlela, imitholampilo, izinkulisa, izikole, kanye ezindlini abavamile. Awukwazi ukusebenzisa le nto kulezo zindawo lapho nomswakama udlula 70%, njengoba akakubekezeleli izimo ezinjalo.
Okwamanje MDF panel ezindongeni kabanzi hhayi kuphela njengendlela material aliqede, kodwa futhi njengoba i-elementi ukwenziwa ifenisha. Ukusebenzisa panel odongeni umhlobiso akudingeki izinto eziningi kakhulu kanye namathuluzi. Uzodinga: odongeni panel, emaceleni, ekhoneni Ornamental, bezinhlamvu, obandayo kubakaki okwesikhathi stapler, Foam futhi dowels, izinzipho. Amathuluzi: hacksaw, ezingeni, isando, isando, ifenisha stapler. Ikamelo kufanele kube elomile lokushisa kulo bangase babe 10-40 degrees centigrade. Packing panel kumele ahlale egumbini izinsuku ezimbili emva kokuvula. Okokuqala, izindonga okuqoqiwe enamabha ukuthi kufanele ilungiswe perpendicular panel ukukhwezwa.
MDF panel izindonga kumele efakwe kusukela kamelo. Ngakolunye uhlangothi iphaneli inkatho avimbekile ukudla noma izipikili. Ngo inkatho iphaneli langaphambilini ifakwe kulandela spike, bese usephinde washaywa. Zonke emalungeni lemahlanganweni kungenziwa lilungiswe usebenzisa amakhona zokuhlobisa. Emaphethelweni phansi kufihliwe ngaphansi baseboard.
Plastic Liquid - isicelo endaweni
Owayeyisazi ukuthi yini ezilungele kangcono radiators flat
Iphepha odongeni isigubungelo
Rubber emikhonweni - esinye sezici ezibaluleke kakhulu kwanoma iyiphi indlela
Sergei Stolyarov: Biography nemisebenzi
Medicine "Levometitsin": yokusetshenziswa
Awazi kanjani ukupheka compote of amabhilikosi? Zama ezinye izindlela
Inyama yenkomo sikadali - okumnandi isobho obukhulu